Cudurka Coronavirus: Tallaalka Ruushka uu soo saaray “oo hadda la siin karo dadka qaba Covid-19” | Gaaroodi News
Cudurka Coronavirus: Tallaalka Ruushka uu soo saaray “oo hadda la siin karo dadka qaba Covid-19”
Madaxweynaha Ruushka oo sheegay in mid ka mid ah gabdhihiisa la siiyay tallaalkan fayraska ka hortaga.
Madaxweynaha dalka Ruushka, Vladimir Putin, ayaa sheegay in tallaal lagu sameeyay gudaha dalkiisa oo loogu talagalay Covid-19, la ansixiyay hadda. Tallaalkan ayaa lagu sameeyay tijaabo qaadatay in ka yar laba bilood oo lagu sameeyay bini-aadamka.
Madaxweyne Putin wuxuu sheegay in tallaalkan la mariyay dhammaan arrimihii loo baahnaa ee tijaabada ah, isagoo tilmaamay in gabadhiisa la siiyayba.
Saraakiisha hoggaamisa dalkaas waxay sheegayaan in tallaal guud oo dalka oo dhan ay billaabi doonaan bisha October.
Khubarada ayaa walaal ka muujiyay sida degdegga ah ee Ruushka uu shaqadan u qabtay, waxayna sheegeen in cilmi-baarayaasha Ruushka ay suuragal tahay in ay si boobsiis ah u sameeyeen tallaalka.
Inkastoo ay jirto cabsi la xiriirta badqabka, haddana Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa isbuucii la soo dhaafay Ruushka ugu baaqday in uu raaco tilmaamaha caalamiga ah ee soo saaridda tallaalka ka hortagga fayraska Covid-19.
Maanta, waxay WHO sheegtay in wadahadal ay kula jirtay Ruushka oo la xiriira dib u eegista tallaalka.
Tallaalka uu Ruushka soo saaray ka mid ma ahan lixda tallaal ee WHO ay ansixisay si ay wejiga seddaxaad ee tijaabada u gaaraan, taas oo qeyb ka ah tijaabo guud oo bini-aadamka lagu sameynayo.
In ka badan 100 nooc oo tallaal oo kala duwan ayaa daafaha caalamka laga soo saaray, iyadoo qaar ka mid ah lagu sameeyay tijaabada aadanaha oo hab caafimaad loo siiyay.
In kastoo si baaxad leh horumar looga sameeyay tallaalada, haddana khubarada waxay sheegayaan in aysan suuragal ahayn in la isticmaalo illaa laga gaarayo bartamaha sannadka 2021.
Muxuu madaxweyne Putin ka yiri Tallaalka?
Isagoo ku tilmaamay Tallaalkii ugu horreeyay ee caalamka, madaxweyne Putin wuxuu sheegay in tallaalka, uu soo saaray machadka Gamaleya Institute ee Moscow uu yahay “mid leh difaac joogto ah” oo ka dhan ah coronavirus. Madaxweyne Putin wuxuu sheegay in tallaalka Covid-19 uu hadda yahay mid la adeegsan karo.
Wuxuu sheegay in uu ogaa in “tallaalka uu xoogaa yahay mid wax ku ool ah”, mana uusan bixinin faafaahin dheeraad ah, balse wuxuu carabka ku adkeeyay in la mariyay “dhammaan tijaabooyiinkii loo baahnaa”.
Mr Putin wuxuu sidoo kale tilmaamay in tallaalka la siiyay mid ka mid ah gabdhihiisa taas oo caafimaad qabtay inkastoo qandhadeeda ay sare u keceysay.
“Waxay ila tahay in taa aawadeed ay uga qeybgashay tijaabada tallaalka”, ayuu yiri madaxweynaha Ruushka.
Sidoo kale, ma uusan cadeyn midda ay tahay gabdhihiisa ee tallaalka qaadatay. Waa arrin dhif iyo naadir ah in Putin uu fagaareyaasha dadweynaha uga hadlo gabdhihiisa.
Nolosha gabdhihiisa ee kala ah Maria Vorontsova iyo Katerina Tikhonova waa mid sir ah oo aan waxba laga ogeyn.
Maxaan ka garaneynaa tallaalka?
Isbuucii la soo dhaafay, dowladda Ruushka waxay ku dhawaaqday in ay si guud u billaabeyso tallaal wadareed ka dhan ah coronavirus, marka la gaaro bisha October.
Seynisyahannada Ruushka waxay sheegeen in tijaabooyiinka horudhaca ah ee tallaalka ay ku soo dhamaadeen si guul ah.
Waxay sheegeen in tallaalka uu adeegsanayo qaabab la waafajiyay adenovirus, oo ah fayraska sababa hargabka caadiga ah, wuxuuna billaabayaa inuu jirka difaaco
Balse in guddiga tayada dawooyiinka ee Ruushka uu ansixiyo tallaalkan waxay imaaneysaa ka hor intaan la shaacin natiijada cilmi baaris guud ee baaxadda leh oo kumannaan qof ay ka qeybgaleen, taas oo loogu yeero Tijaabada Wejiga-seddaxaad.
Khubarada waxay doonayaan in tijaabadaas ay muhiim u noqoto xaqiijinta badqabka iyo waxtarka tallaalka.
Iyadoo taa ay jirto, haddana wasiirka caafimaadka Ruushka, Mikhail Murashko, wuxuu sheegay in tallaalka “la caddeeyay inuu si wayn waxtar u leeyahay, badqabna yahay,” wuxuu sidoo kale ku tilmaamay tallaabo wayn oo loo qaaday “dhanka guusha aadanaha” ee ka dhanka ah fayraska Covid-19.